News 18 Nepal || प्रधानमन्त्री ओलीले किन डाके सुरक्षा परिषद्को बैठक ?
प्रधानमन्त्री ओलीले किन डाके सुरक्षा परिषद्को बैठक ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा परिषद्को बैठक राख्ने भएका छन् । उनले मंगलबार उक्त बैठक राख्न लागेका हुन् । गम्भीर सुरक्षा चुनौती देखिँदा यस्तो बैठक बोलाइन्छ । यसलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित बैठक भनेका छन् ।
प्रधानसेनापती पूर्णचन्द्र थापा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबीच सोमबार भेटवार्ता हुनु र मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउने विषय आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।
यद्यपि सोमबार भएको भेट सेनाले उपयोग गरेको जग्गा सर्वोच्च अदालतका लागि आवश्यक परेर दिने सम्बन्धि प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लगाउने विषयमा भनिए पनि उत्पन्न राजनीति परिदृष्यमा छलफल भएको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय विकसित हुँदै गरेको राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लागेको बालुवाटार उच्च स्रोतले बतायो । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानसेनापति थापा सहभागी हुनेछन् ।
समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेना परिचालन वा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले रक्षा मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन् ।
एमसीसी संसदबाट पास हुन्छ !
‘बालुवा पेलेर तेल निस्किनु, केपी ओली सुध्रिनु एउटै’
‘संसद पुन:स्थापनापछि सरकार झन् बलियो बन्यो’